Ku heeso qaybta diyaaradaha Freeware (3)
Su'aal Ku heeso qaybta diyaaradaha Freeware (3)
1 sano 4 bilood ka hor #945 by DRCW
Ku heeso diyaaradaha Freeware (qaybta 3)
Halkan waxaad ku aragtaa boostada ugu dambaysa mawduucan (mar kale fadlan akhri qaybta 1 iyo 2)
Sidaas awgeed waxaannu KLM 737 ka dhigannay sida diyaaradaha duulimaadka ah laakiin weli waxaa jira waxyaabo aan sameyn karno. Haddii aad raacdo qayb ka mid ah 1 &
2, ka dibna waxaad soo dejisay xNUMX-717 website ka Rikooo.com. Iyada oo rakibidda this, aad si toos ah ku daray FDSFX pop-
taas oo kuu ogolaanaysa inaad haysato shaqaal saaran adigoo adeegsanaya furayaasha guddiga. Dabcan haddii aad isticmaalayso FS-Passenger
markaa waxaa laga yaabaa inay u muuqato mid aan loo baahneyn si kastaba ha ahaatee mararka qaarkood waxaa dhici karta markaad rabto inaad duuliso adiga oo aan lahayn FSP.
Aynu sheegno inaad had iyo jeer isticmaasho FSP oo aragto baahi loo qabo in aad isticmaasho FDSFX-pop-up, Waxaad mar walba edbin kartaa oo bedeli kartaa codka mid kasta
shakhsi ahaan u wareegto faylasha muusikada ama nooc kasta MP3 kale. Marka 717-200 la rakibay, rakibidda gawaarida ayaa saldhig u ah
dhageysiga maqalka FSX ee ugu weyn ee codka. Markaad furto qaybta codka ee ugu weyn waxaad arki doontaa faylka lagu calaamadeeyey "FDSFX". Waa kuwan
halkaas oo faylasha mp3 maqalka lagu kaydiyo:
Wali ma baahna inaad sheegto haddii aad isticmaashay guddi tayada maqalku maahan mid aad u weyn. Waxaad nadiifin kartaa faylasha asalka ah MixPad
Software Multitrack oo lacag la'aan ah oo laga heli karo line on: www.nch.com.au/mixpad/
Guji 'kala soo deg halkan"qaybta.
Qaado feylka aad rabto inaad nadiifiso Tusaale: (18_On Approach_Ann) ka dibna nuqulna ku dheji "Mixpad". Riix natiijooyinka
Isticbaal oo isticmaal Isticmaalayaasha (Sawir) markaad ciyaarayso maqalka. Isku hagaajin goobaha aad ka hesho codka ugu fiican oo guji
codso. Isku day inaad kordhiso oo aad jarjartid. si aad u hesho cod wanaagsan. Haddii aad ogaato in mashiinku uu kufilan yahay tijaabin isku day inaad jarayso sigaarka
inta u dhaxaysa 100 iyo 250hz. Haddii sarreeyaashu ay baddalaan, iskuday inaad jarjarisid xawaaraha ku wareegsan 5 ilaa 7 khz ka dibna kor u qaado sicirka dhexe. Hadday tahay
mugga waa mid aad u hooseeya waxaad ku dardar gelin kartaa adoo gujinaya Calaamadda Amplify iyo kordhinta mugga illaa 400%. Marka la dhammeeyo guji
on Home ka dibna u dhoofi kartaa faylashaada downloads ee daaqadaha. Ka bixida MixPad. Waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad rabto inaad badbaadiso "
dooro maya "
Furi faylka aad soo dejisay oo waxaa jiri doona foormo magaciisu yahay "Default Default" Tani waa faylka aad ku habeysey. U qaado jidkaaga
desktop ka dibna dib u magacaw (18_On Approach_Ann). Waxaad hadda nuqul ka dhigi kartaa oo ku dhejin kartaa FDSFX folder iyo marka
taas oo keentay in la doorto Copy iyo Bedelka. Waxaad hadda ku beddeshay faylka tayada maqal la'aanta ee asalka ah iyadoo la cusbooneysiiyey
Waxaad bedeli kartaa dhammaan faylasha kor ku xusan ee MP3 waxaad rabto. U ogolow in aad rabto inaad bedesho (01_Gate Ambience) a
faylka heesaha ee maktabadda MP3. Waxaad si fudud u jiidi kartaa nuqul ka mid ah faylka muusikada macaamiishaada oo aad dib u habeyn lahayd (01_Gate
Diiwaangelinta) ka dibna nuqul ka samee & ku dhaji faylka muhiimka ah ee FDFSX oo dooro nuqul iyo beddelid marka la keeno.
Fiiro gaar ah: Isku darka MixPad waxaa ka mid ah barnaamijka bedelka faylasha oo loo yaqaan 'NCH Suite'. Iyada oo barnaamijkan aad u beddeli karto
MP3 waxay ku jirtaa dhawaaqyo Wave taas oo suurtagelisa in ay wax ka beddesho oo ay bedesho feyl kasta oo cod .
Haatan waxaan ku dari doonaa a soo celinta iyo xawaaraha taxiga ah ee KLM 737. Barnaamijkani waa freel loo yaqaan sida
Groundhandling5 . Tag boggaan: flyawaysimulation.com/downloads/f...ing-gauges-
Marka la soo dajiyo ka hor inta aanad soo saarin, waxaad abuurtaa faylka ku yaal dokumintiyadaada kuna qor magaca "Groundhandling5" ka dibna u jooji
macaamiishaada. Ka saar dhammaan faylashaada aad ka soo dejisan karto Groundhandling5 oo aad abuurtay. Hadda fur furahaaga FSX
markaa kadib Nuqul & Dhejin "Groundhandling5" ee ku jira faylka muhiimka ah ee FSX. Adiga kaliya waa inaad sameysaa tan mar.
Hadda ka fur feylka KLM 737 ka soo daabacan FSX simobjects / Faylka diyaaradaha. Raadi diyaaradaha faylka guddiga ka dibna nuqul ka samee
RCB_Groundhandling5 Guddi-ku-Fadlan Faylka Faylka Guddiga KLM 737 (Kuwani waa tusmooyinka Groundhandling5)
Nuqul iyo Dajin RCB_Groundhandling5_Sound.dll ee Faylka Gudbinta KLM 737 (feylkan wuxuu u sheegayaa FSX inuu isticmaalo codka
laga bilaabo keydka codka weyn)
Ugu dambeyntii fur furka README oo waxaad ka heli doontaa qaybta soo socota:
// gauge03 = RCB_Groundhandling! IsticmaalTaashidaPedals, 0,0
gauge04 = RCB_Groundhandling5! Burburiyo, 146,2,56,61
Furi faylka KLM Panel.cfg iyo qaybta sare waa in ay la mid tahay tan:
daaqada00 = Guddi Weyn
window01 = Furayaasha
Window03 = Gawaarida Gawaarida
Window04 = Guddi Hoosaad ah
Window05 = Diyaarad SFX FlightDeck
Window06 = Xakamaynta albaabka
Window07 = Gudida Gawaarida
Window11 = Guddi yar yar
Window12 = Xadka Heerka
Window14 = Saacad
Window15 = Gawaarida dabka
Window17 = Dhimista Altimeter
Window18 = Dhaqan celinta
daaqadda19 = Dhacdooyin waaweyn
Xuquuqda hoosteeda ee Window21 = Nidaamka raadiyaha ee ku jira Window22 = Groundhandling5
Haddaba haatan u soco ilaa goormaadse helaysaa?
Xuquuqda hoos timaada qaybtan waa halka aad nuqul ka koobi kartid iyo dhegi doonto:
Badal ** ** 22 si ay u akhriso [Window22] [/ b]
//gauge03 = RCB_Groundhandling! IsticmaalTaashidaPedals, 0,0
Tirtir // // bilawga xariiqdan !!!
Si aad u tijaabiso: Ku bilow FSX iyo markaad ku dhejiso KLM 737, riix badhanka furahaaga (bar moodhku waa inuu ka muuqdaa xagga sare
shaashadda) doorasho doorasho / Shirkad Sawir / waxaadna gujisaa Groundhandling5. Xaqiiji in ay ka shaqeyso kadibna xiro FSX.
Hawlaha Dhex-gelinta ee ugu dambeeyay:
Iyadoo isbeddellada aan sameynay illaa iyo hadda waxa laga yaabaa in aad dareentay in aysan jirin cod markaad dooratid Seatbelt iyo No Sigaar cabid
Tani waa hab fudud oo sahlan waxaanan ka tagay ugu dambayntii maxaa yeelay waxaan rabay inaad fahanto arimaha maqalka marka hore. Hadda waxaan daboolnay
degaanku wuxuu u ogolaanayaa inuu hagaajiyo. Marka hore waxaad leedahay diyaarad ku jirta ururinta taxadar la'aanta ah ee FSX oo leh suunka shaqada oo aan lahayn sigaar cabista
oo leh qaylada dhawaaqa sidaas darteed waxaan u baahan doonnaa inaan furo mid ka mid ah duuliyeyaasha diyaaradaha. Mar kale FSX faylka muhiimka ah / simobjects /
diyaaradaha. Soo hel folder-ka Airbus_A321 oo fur.
Furi faylka codka oo raadi faylka calaamadda "dhawaaqa" kadibna fur.
Hoos u dhig oo koobi & qaybtan qaybtan ku dheji qoraalkaaga:
Qaybaha ugu sarreeya waxay ku dabagalaan FSX habka loo kala qeybiyo.
Qaybta ugu hooseysa (filename = CabinAlert) waxay u sheegeysaa FSX inay ka soo jiidato codka laga soo qaaday feylka muhiimka ah ee FSX.
Hadda fur furka codka ee KLM oo waxaa sidoo kale ku jiri doona faylka "cod". Furi faylka codka oo nuqul ka samee & kuwaan kuwan
qaybta hoose ee liiska. Had iyo jeer meel meel u dhaxeyso qaybaha.
Waa inaad hadda haysataa qaylada goortaas markaad istcimaalato furayaasha.
Waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka baratay halkan. Marka aad tababar ku sameyso xirfadahan waxaad heli doontaa dhibic markaad soo dejisid freeware
diyaarad iyo soo saarida mashiinkaaga, waxay noqon doontaa dabeecada labaad si aad u sameysatid hagaajintan intaanad ku dhejin FSX. Waxaad awoodi doontaa
si aad u sheegto waxa ku soo kordha adiga oo eegaya faylka cfg-ga ah iyo faylka guddiga si aan ugu sheegno faylka codka. Arrintaasna waan soo koobnay
qayb ahaan 1.
Meelaha mustaqbalka waxaan idin ku bari doonaa sida loo rakibo qalabka 2D ee diyaaradaha aan ku jirin. Sida loo daro GPS / Autopilot /
Raadiyaha / iyo daaqadaha kale ee daaqadaha ku jira diyaaradaha aan iyaga haysan, ka dibna sida loo rakibo bambo-gal